थाइल्याण्ड : जसलाई असंभव भनिएको थियो, त्यो अभियान अब पूरा भयो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
थाइल्याण्ड : जसलाई असंभव भनिएको थियो, त्यो अभियान अब पूरा भयो
बीबीसी। ‘हामीलाई थाहा छैन यो चमत्कार हो की विज्ञान वा अन्य केही। सबै १३ अब गुफाभन्दा बाहिर छन्।’ थाइल्याण्डको अँध्यारो र पानीले भरिएको गुफाभित्र १८ दिनदेखि फसेका १२ फुटबल खेलाडी र उनका कोचलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने अभियानमा जुटेका एकजना थाई उद्धारकर्ताको भनाइ हो यो।
१२ फुटबल खेलाडी आफ्ना कोचसँग २३ जुन सो गुफा घुम्न गएका थिए। र उनीहरु त्यही गुफामा १८ दिनसम्म फसेका थिए। अहिले उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा बाहिर निकालिएको छ।
अध्यारो, पानीले भरिएको र नाकबेली बाटो भएको उक्त गु्फामा बसेका १२ किशोर र उनीहरुका फुटबल कोचलाई बाहिर निकाल्ने अभियानलाई विश्वभरका संचारमाध्यमले महत्वका सा प्रशारण गरेका थिए।
उनीहरुलाई सुरक्षित बाहिर निकालेको खबर सुन्न थाइल्याण्ड र विश्वका करोडौं मानिस आतुर थिए। यो निकै मुश्किल अवस्थामा मानवीय आशा र हौसलाको जितको कहानी हो।
मिशन पूरा भएपछि चियाङ राय प्रान्तका गर्भनर नारोंगसक ओसोटानकोर्नले उद्धार अभियानमा संलग्न टिमलाई ‘संयुक्त राष्ट्रिय टिम’ को संज्ञा दिए। गुफामा फसेका १२ किशोर र एक कोचलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने अभियानमा थाइल्याण्डको नौसेना र वायुसेना बाहेक बेलायत, चीन, म्याम्मार, लाओस, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र जापानसहित कयौं देशका विशेषज्ञ संलग्न थिए।
गुफा नजिकै रहने स्थानीयले बचाउ अभियानमा जुटेका स्वयंसेवकलाई खाना खुवाउनुका साथै उनीहरुका कपडासमेत धोएका थिए।
विश्वका धेरै मुलुकबाट आएका गोताखोरले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर गुफा भित्र फसेका १२ किशोर र उनीहरुको कोचलाई खोजे र लामो र जटिल अभियानपछि अन्तिममा उनीहरुलाई बाहिर निकाल्न सफल भए।
गुफा बाहिर यतिबेला खुशीको माहोल छ। तर धेरै मानिस यो अभियानमा ज्यान गुमाएका स्वयंसेवक गोताखोर समन गुनानका बारेमा पनि सोचिरहेका होलान्। थाइल्याण्ड सरकारले बुधबार उनको राजकीय सम्मानकासाथ अन्तेष्टि गर्ने भएको छ।
गुफाबाट सुरक्षित बाहिर निकालिएका सबै फुटबल खेलाडी र उनका कोच अहिले अस्पतालमा सँगै छन्। आइतबार चार किशोरलाई गुफाबाट बाहिर निकालेर अस्पताल पुर्याइएको थियो। सोमबार अन्य चार किशोरलाई बाहिर निकालेर अस्पताल पुर्याइएको थियो र मंगलबार चार खेलाडी र कोचलाई सुरक्षित बाहिर निकालेर अस्पताल पुर्याइएको थियो।
यसरी यो अभियानलाई सफलतापूर्वक पूरा गरिएको छ, जसलाई सुरुमा असंभव मानिएको थियो। अस्पतालमा रहेका बीबीसी संवाददाता निकल बीकेका अनुसार गुफाबाट सुरक्षित बाहिर निकालिएका सबै किशोरका परिवारजन यतिबेला अस्पतालमा पुगेका छन्।
यद्यपी परिवारका सदस्यलाई उनीहरुसँग भेट्न दिइएको छैन्। केही परिवारका सदस्यले गुफामा पसेका बालकलाई सकुशल उद्धार होला भन्ने विश्वास नलागेको बताएका छन् भने केहीले आफू हरेस नखाएको बताएका छन्। यतिबेला उनीहरुको अनुहारमा चम्किलो मुस्कान देखिएको छ।
पहिला आठ किशोरको उपचार गरेका डाक्टरक अनुसार उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको छ। यद्यपी दुई हप्तासम्म अध्यारो गुफामा बसेका कारण मानसिक स्थितिमा भएको असरका बारेमा जाँच हुनेछ।
यी १२ फुटबल खेलाडी एक टिमका रुपमा गुफामा गएका थिए र गुफाभित्रै पनि टिमकै रुपमा अप्ठेरो अवस्थामा पनि जिवित रहे। अब ७२ घण्टादेखि जारी उद्धार अभियान पूरा भएपछि टिम पूरा भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अभियान पूरा भएकोमा थाई सेनालाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘अमेरिकाकातर्फबाट १२ किशोर र उनका कोचलाई सुरक्षित बाहिर निकालेकोमा थाई नेवीलाई शुभकामना। यो कति सुन्दर पल हो। सबै स्वतन्त्र छन्। राम्रो काम।
जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलका प्रवक्ताले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रशंसा गर्न कति धेरै कुरा छ। बहादुर किशोर र उनको कोचको दृढता, उद्धारकर्मीको क्षमता र दृढ संकल्प।
बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरीजा मे ले पनि उद्धारकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै ट्विट गरेकी छन्, ‘थाइल्याण्डको गुफामा फसेकालाई उद्धार गरेकोमा खुशी छु। यसलाई विश्वले हेरिरहेको छ। हामी यो अभियानमा सहाभागीहरुको बहादुरीलाई सलाम गर्छौं।